विचित्र Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
विश्‍वको सबैभन्दा ठूला १० अद्भूत प्रतिमा तथा मूर्तिहरु जुन एउटै चट्टानबाट बनेका छन्…फोटोफिचर
संसारमा धेरै ठुल्ठूला प्रतिमा तथा मूर्ति बनेका छन्। तर ती मध्येपनि केही यस्ता प्रतिमा बनेका छन् जुन विश्वलाई नै चकित तथा रोमान्टिक बनाइदिन्छ। प्रतिमाले मानिसमा नयाँ चेतनाभरिदिने काम गराईदिन्छ। ती सबै प्रतिमाहरु एउटा ठूलो...
विश्वमा धेरै अचम्मका गाउँहरु रहेका छन् जहाँ नामै सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ ।
विश्वमा धेरै अचम्मका गाउँहरु रहेका छन् जहाँ नामै सुनेर तपाई छक्क पर्नुहुन्छ। किनकी गाउँको नाम डटकमबाट राखिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगर जिल्लामा रहेको ‘स्न्यापडिल डटकम’ कुनै कर्सियल कम्पनीको नाम नभइ यो गाउँको नाम...
सुन्दैमा विचित्र ! आलु खाँदा रक्सीको नशा !!!
आलु खाँदा रक्सीको नशा ! सुन्दैमा विचित्र लाग्ने । तर अमेरिकाका एक पुरुषलाई भने यस्तै हुन्छ । उनलाई आलु खाएपछि रक्सीले जस्तै नशा लाग्छ । ओहियोका ३५ वर्षे निक हेसले मलाई आलुको नशा लाग्छ...